ट्विंकलले खोलिन् राज - शाहरुख , सलमान र आमिरको भन्दा अक्षयको लामो !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारकी श्रीमति ट्विंकल खन्नाले केहि समय पहिले अनौठो खुलासा गरेकी थिइन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार करण जोहरको शोमा करणले ट्विंकललाई उनको श्रीमान् अक्षय कुमारसँग के छ ? जुन बलिउड कलाकार शाहरुख , सलमान र आमिर खानसँग छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
ट्विंकलले उत्तर अंग्रेजीमा दिदै भनिन् - अ फ्यू एक्स्ट्रा इन्चेस (A few extra inches) । उत्तरसँगै करण जोहरको अनुहार रातो बन्यो ।
अक्षय कुमार पनि लाजले यता-उता हेर्न थाले। ट्विंकल यतिमै रोकिनन् करणलाई अक्षय कुमार तर्फ प्रश्न गर्न नदिइ आफ्नो कुरा स्पस्ट पारिन् । उनले अक्षयको कुनै विशेष अंगको कुरा नगरेर अक्षयको खुट्टाको भनेको बताइन् ।